Tranofiara fifamoivoizana VMS- loko feno
Ny tranofiara fitaterana JCT VMS dia afaka mampiseho dinamika fifamoivoizana, fitarihana ary fitarihana ny fifamoivoizana, manana ireto tombony manaraka ireto koa izy: 1. Avoahy ny fampahalalana an-dàlana tampoka amin'ny fotoana hanamaivanana ny fitohanan'ny fifamoivoizana; 2. Ampiasao ny fomba fampitana data tsy misy tariby, 4G ary data hafa hifandray amin'ny alàlan'ny sehatra fanaraha-maso ny fifamoivoizana; 3. Azo ampifandraisina amina protokol marobe (NTCIP, TCP / IP, PROFIBUS, XML-OPC, sns); 4. Ny haben'ny efijery an'ny tranofiara fifamoivoizana VMS dia azo namboarina; Model VMS fifamoivoizana-color trailer ...
Pikantsary miloko tokana-fifamoivoizana VMS
JCT VMS tranofiara fitetezam-paritra, efijery tokana loko abbrevi, nohafohezina ho VMS manerantany, dia fitaovana manandanja amin'ny famoahana ny toetoetran'ny fifamoivoizana sy ny mombamomba ny fivezivezena. Izy io dia fitaovana fampirantiana fampahalalana momba ny fifamoivoizana misy fitaovana maivana amin'ny hazavana LED ho toy ny singa fampirantiana fototra, miaraka amin'ny asan'ny sary sy ny fampisehoana lahatsoratra. voafafa tanteraka ny vatoaratra, misoroka ...
Fihetsiketsehana fampisehoana varavarankely aorian'ny taxi
Ny rafitry ny fampisehoana JCT Taxi aoriana dia namolavola endrika sy antonony, fahombiazana avo lenta, vokarin'ny fampisehoana marin-toerana, ary fametrahana sy fikojakojana mety.
Lisitry ny fampisehoana LED Topper Taxi
2㎡ TRAILER LED MOBILE SOLAR
Modely: E-F2 SOLAR
2m2 solosaina finday tarihin-tselatra （Model ： E-F2 Solar） dia mandray ny angovo avy amin'ny masoandro, ny efijery feno loko LED ary ny tranofiara fanaovana dokambarotra finday. Mamaky ny fetra teo aloha fa ny tranofiara finday LED dia mila mahita loharano herinaratra ivelany na mitondra mpamokatra herinaratra ho an'ny famatsiana herinaratra ary mandray mivantana ny fomba famatsiana herinaratra tsy miankina amin'ny masoandro.
Modely: E-F4 SOLAR
4m2 solosaina finday tarihin-tselatra （Model ： E-F4 SOLAR） mampiditra voalohany ny efijery feno masoandro, taratra LED an-kalamanjana sy ireo tranofiara fanaovana dokambarotra finday ho lasa organika iray manontolo.
JCT 6M MOBILE LED TRUCK-IVECO （Model ： E-YWK3300） dia mandray chassis IVECO; ny refin'ny ankapobeny amin'ny kamio: 5995 * 2200 * 3200 mm; ny famoahana ny fenitra nasionaly: National Ⅴ / Ⅵ. Ny kalesy dia misy sofa, latabatra sy seza, tontonana tsy misy afo mirehitra, gorodona vita amin'ny aliminioma misy endrika, TV LCD marika ary sehatra namboarina.
JCT 6m fampirantiana finday kamiao-Foton Aumark （Model ： E-KR3360） dia mampiasa ny marika avo lenta an'ny Foton Motor Group "Aumark" ho toy ny chassis finday, miaraka amin'ny superpower "Cummins" an'izao tontolo izao, manana toerana mitondra fiara malalaka sy sehatry ny fahitana
JCT 8M mobile LED kamio （Model ： E-W4800） dia mandray chassis kamiao manokana an'ny Foton Aumark ary ny haben'ny fiara dia 8730 * 2370 * 3990mm. Ny kamio LED 8m finday dia azo fidina hofanina miaraka amin'ny efijery LED miloko tokana na roa sosona miaraka amin'ny haben'ny efijery hatramin'ny 5440 x 2240mm izay azo alaina amin'ny lafiny iray na roa. Azo atao fitaovana ihany koa ny dingana mandeha ho azy, ny kamio LED dia ho lasa kamiaobe mihetsika rehefa miseho ny dingana
JCT 6m LED MOBILE TRUCK - Foton Aumark （Model ： E-W3360） dia novaina niaraka tamin'ny chassis Foton Aumark sy ny efijery fanangonana angovo miloko ivelany feno. Ny vatan'ny kamio an'ny E-W3360 LED MOBILE TRUCK dia latsaky ny 6 metatra, afaka mahazo alalana sy mitondra izy
Na aiza na aiza misy azy ary manao ahoana ny fihantsiana ny tontolo iainana dia afaka manao ny asany amin'ny fomba tsy manam-paharoa foana izy. JCT 6m LED MOBILE TRUCK-Nanjing YueJin （Model ： E-SH2800） dia lasa mpitatitra doka vaovao mampitambatra ny doka, famoahana vaovao ary ny fahitalavitra mandeha amin'ny mason'ny besinimaro.
Kamiaona finday taratra finday, Mobile Led Billboard kamiao, Led Mobile Trailer, Led Mobile kamio, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday, Nentina amidy kamiao finday,